Islamic governments’ failure to react like Chinese government’s revenge after Anti-Chinese Riots in Myanmar is the root cause of nearly halfacentury old ongoing Anti-Muslim Atrocities in Myanmar | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeIslamic governments’ failure to react like Chinese government’s revenge after Anti-Chinese Riots in Myanmar is the root cause of nearly halfacentury old ongoing Anti-Muslim Atrocities in Myanmar
Islamic governments’ failure to react like Chinese government’s revenge after Anti-Chinese Riots in Myanmar is the root cause of nearly halfacentury old ongoing Anti-Muslim Atrocities in Myanmar
April 10, 2017 April 11, 2017 drkokogyi
Yes…Peking Radio (I heard with my ears) said 100,000 .00 Chinese soldiers came out from Chinese Military with ammunition …wear the Burmese Communist Party uniforms and joined them. THIS IS THE START of Wa army. Koolone battle… Thousands of Burmese soldiers died every year (according to 4th. Jan awards in Newspapers. )
FYI Peking Radio was in Burmese language byasharp/hostile/loud (Swar swar in Burmese) spoken by Chinese slang. It was Bama Communist voice radio.
At first Dragon King exodus when Rohingyas were chased out…that time Bangla PM told Ne Win that if Ne Win don’t accept back Rohingyas he would armed them and send back (to fight). And Bangla border Guards shoot across the border (Naff river) into Myanmar (Burma). So Ne Win have to accept more than he chased out.
၁၉၆၇ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်းအပေါ် တရုတ်ပြည်အနေနဲ့ သူ့လူမျိုးတွေဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီကနေ့အထိ ဗမာတွေ တရုတ်နဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွားကို မထိရဲတော့တာဖြစ်တယ် !
အစ္စလာမ့်မစ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ သင်ခန်းစာယူဖို့ အတော်ကောင်းတယ် .. 😣
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေး အဖုအထစ်များနှင့် ပျားရည်ဆမ်း ကာလများ (အပိုင်း ၂)
တရုတ်က ဦးနေဝင်းအစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့အတွက် ဗ-က-ပကို ပုံအောပြီး လောင်းခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါ။
မြန်မာဟာ ဘက်မလိုက်တဲ့ ကြားနေရေး နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာ ဆက်လက် ကိုင်စွဲထားပါတယ်၊ ဆိုဗီယက်ရုရှား၊ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့ အကြားက မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ ရဲ့ အခင်းအကျင်းမှာ ဘယ်သူ့ဘက်မှ မပါအောင် ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကို ပီကင်းက အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
မြန်မာကလည်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့နေတာကို ဇောချွေးပြန်ပြီး စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ကာလဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
နယ်စပ်မှာ ဗ-က-ပဟာ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အားအပြည့် တပ်မတော်နဲ့ အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်တွေဆင်နေချိန်မှာ တရုတ်ပေး ထားတဲ့ ဗကပ ရေဒီယိုကလည်း “နေဝင်းစန်းယု” ဆိုပြီး ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း ဝါဒဖြန့်နေချိန်မှာ ပီကင်းနဲ့ရန်ကုန်ကြား ဆက်ဆံရေးဟာ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကောင်းလာ နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပီကင်းနေ့စဉ်သတင်းစာမှာ ဦးနေဝင်းအစိုးရကို ဖောက်ပြန်သူတွေ ဖက်ဆစ်တွေလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ တာတွေ နည်းသွားသလို၊ မြန်မာဘက်က လည်း ဗ-က-ပကို တရုတ်က သင်တန်းပေး ကူညီနေတဲ့ အကြောင်းကို စွပ်စွဲတာတွေကို သတင်းစာတွေမှာ အရေးကျဲ သွားပါတယ်။
၁၉၆၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ဦးနေဝင်းဟာ ပါကစ္စတန်ကို အလည်အပတ် သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခရီး စဉ်မှာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ကြိတ်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ ညီလာခံကြီးမှာ ဦးနေဝင်းက တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံ ရေး ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်း၊ ၁၉၆၇ခုနှစ်က တရုတ်-ဗမာအရေးအခင်းက ရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို ကုစားချင်တဲ့ အ ကြောင်းနဲ့ ဒီအရုပ်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို မေ့ပျောက်ဖို့ ပြောခဲ့ပြီး၊ ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်း ဖို့အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးက ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သံတမန်ရေးရာခြေလှမ်းတွေလည်း အကောင်းဘက်ကို စပြီးရွေ့လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပတဲ့ အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား (မြောက်ကိုရီးယား အကြမ်းဖက်တွေ ဗုံးပေါက်ခွဲခဲ့တဲ့ နေရာဟောင်း) ကို တရုတ်စစ်သံမှူး တက်ရောက်ပြီး လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ချခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၊ ဂျုလိုင်၊ ၁၉၆၈ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့ ပီကင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပွဲကို တက်ရောက်ချီး မြှင့်ခဲ့တာ ကတော့ တရုတ် ဒု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Xu Yixin ပဲဖြစ်ပြီး၊ ဒါဟာ ဆိုးဝါးနေတဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်ကောင်းချင်တဲ့ လက္ခဏာကို တရုတ်ဖက်က ပြသလိုက်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၀ မှာတော့ တရုတ်နဲ့ မြန်မာသံအမတ်တွေ ပြန်လည် ခန့်အပ် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၁ခုနှစ် သြဂုတ်လထဲမှာတော့ ဦးနေဝင်းကိုယ်တိုင် ပီကင်းကို အလည်အပတ် သွားရောက်ခဲ့ရာ ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်းက ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ ပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးကို ပြန်ပြီး စတင်ဖို့ နှစ်ဖက် သဘောတူခဲ့သလို တရုတ်-ဗမာ အရေးအခင်း ကိစ္စကိုလည်း နှစ်ဖက်ကြေ ကြေလည်လည် ဆွေးနွေး သဘောတူ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးနေဝင်းဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ မော်စီတုံးကိုလည်း တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာကတော့ တရုတ်အပေါ်မှာ အရင်လိုပဲ ဘက်မလိုက်မူဝါဒ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူဝါဒတွေ စတင် ကျင့်သုံးမှာကို သဘောတူခဲ့သလို တရုတ်ကလည်း မြန်မာကို အရင်လိုပဲ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ ပြန်ပြီး ပေးဖို့ သဘောတူ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့ တရုတ်ဟာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ UNSC ခေါ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ မဲကို လိုအပ် နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ ဦးသန့်ဟာ အဲဒီအချိန်က ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ဦးနေဝင်းအစိုးရက UN မှာ တရုတ်ဘက်က အဆိုပြုထော က်ခံ မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန့်ကလည်း ကူညီခဲ့တဲ့အတွက် ချူအင်လိုင်းက ဒီကိစ္စကို တဖွဖွ ပြောခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ရဲ့ အရေးကြီး ခြေလှမ်းတရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ တရုတ် ထောက်ပံ့ ထားတဲ့ ဗကပရဲ့အနေအထားကို သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နယ်စပ်က တပ်တွေကို ဦးစီးပြီး ဝင်လာသူတွေက ဖုန်ကြားရှင်နဲ့ဖုန်ကြားဖူး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင် ဆိုတာ အခု (MNDAA) ကိုးကန့် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ထဲမှာဆိုရင် ဗ-က-ပ တပ်တွေဟာ ရှမ်းပြည် နမ်းခမ်းမြို့ရဲ့ မျက် နှာချင်းဆိုင် သံလွင်မြစ်ရဲ့ မြောက်ဖျားကို စတင်သိမ်းပိုက် နေပြီဖြစ်ပါ တယ်။ ဦးနေဝင်းဟာ ပြည်သူ့စစ် ဖွဲ့စည်းပြီး ဗကပ သူပုန် တွေကို ခုခံဖို့ စတင် ဆော်သြနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၈ မှာပဲ ဗ-က-ပ ဗဟိုမှာ ကြီးမားတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဗိုလ်ဇေယျ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗ-က-ပရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်) ဟာ ပဲခူးရိုးမမှာ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ထဲမှာတော့ သခင်သန်းထွန်းဟာ ပဲခူးရိုးမမှာပဲ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ မြောက် ပိုင်းက ဗ-က-ပ တပ်တွေဟာ ဒီဇင်ဘာ လထဲမှာတော့ ဝ နယ်ထဲကို စတင်ပြီး ဝင်ရောက်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနေဝင်းဟာ “တရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူ” သို့မဟုတ် “China Expert” လို့ခေါ်ရမယ့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တံခါးပိတ်ထားတဲ့ မော်စီတုံးရဲ့တရုတ်ပြည်ကို နားလည်ဖို့ ဦးနေဝင်းကို အနောက်နိုင်ငံ တွေကရော အရှေ့နိုင်ငံတွေကပါ ချည်းကပ်လေ့လာရ တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြားနေရေး ဘက်မလိုက်ရေးမူဝါဒဆိုတာ လူဦးရေထူထပ်ပြီး အင်အား ကြီးတဲ့ တရုတ် အိမ်နီးချင်းကို ကြည့်ပြီးတော့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ရန်လိုကျူးကျော် ရန်စမှုကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့ အတွက် ထားခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒလို့ မှတ်ချက်ချ နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆိုဗီယက် ရုရှားကိုရော အနောက် အုပ်စုဘက်ကိုပါ ပါမသွားအောင် နေပြခဲ့သလို၊ ပြည်တွင်းက US ရဲ့ ကူ ညီထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ၁၉၇၀ မှာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကို စိတ်ဆိုး အမျက်ထွက်စေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကို ဦးနေဝင်းဟာ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
တရုတ် အနေနဲ့ ဗ-က-ပ ကို လက်နက်အင်အား၊ ငွေကြေး အင်အား၊ လူအင်အား အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအရ အကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ အချက်ကလည်း ဦးနေဝင်းအစိုးရဟာ တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေး ပြန်ကောင်းဖို့ အမြန် အကောင်အထည် ဖော်ရတဲ့ တွန်းအားပေးချက် တချက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။
← ပြည် ခိုင် ဖြိုး ပါတီ ဖျက်သိမ်းရတော့မည်လော
မဘသ တွေ ၉၆၉တွေ ဗမာစစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ မင်းတို့ မတရားသဖြင့် နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်တာခံနေရလို့ အစ္စလာမ်တွေ သွေးပျက်နေကြလိမ့်မယ် ကြောက်နေကြ လိမ့်မယ် လို့များ ထင်နေကြသလား →